စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်ရောစပ်စာ (Doctored Box Mix) - ကိတ်မုန့်
အကောင်းဆုံး စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်ရောနှော စာရွက် ငါခြစ်ရာကနေကောင်းတစ် ဦး စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်နှင့်အတူစွဲလမ်းတယ်ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံကိုယ့်အချိန်အများကြီးရှိသည်နှင့်ကောင်းတစ် ဦး လိုအပ်ပါတယ် စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်စာရွက် မြန်! ဒါကသံပုရာလွယ်ကူသော buttercream နှင့်အတူငါ့သွားလာရင်းမှစတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်ရောနှောစာရွက်ပါ!
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ Duncan က Hines box ကိုရောသမမွှေကြိုက်တတ်တဲ့။ ငါသူတို့အကောင်းဆုံးအရသာနှင့်အလွန်စိုထိုင်းသောထင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စတော်ဘယ်ရီသေတ္တာရောစပ်မှုကအရမ်းအရသာရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းတဲ့အရသာကိုဖြစ်စေဖို့ပါဝင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ထဲမှာထည့်တယ်။
ဤပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသင်၏စတော်ဘယ်ရီသေတ္တာအရောအနှောထဲသို့ထည့်ခြင်းသည်ကိတ်မုန့်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုထူထပ်စေပြီးသိုလှောင်ခြင်းအတွက်ပိုကောင်းစေသည်။ သင်သည်ဤကိတ်မုန့်ကို fondant ဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ သင်ကိတ်မုန့်အလွှာများကိုစုပုံရန်မကြိုးစားမီကိတ်မုန့်အတွင်းရှိထောပတ်ကိုခိုင်မာစေရန်သင်၏ကိတ်မုန့်များကို ဦး စွာအေးအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုပြုလုပ်ရန်လေ့လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်စစ်ဆေးပါ သင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်သင်ခန်းစာမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း ။
ငါတခါကုန်တယ်စတော်ဘယ်ရီထည့်သွင်းကြိုးစားခဲ့ကြောင့်အဆင်ပြေထွက်လှည့်ပေမယ့်စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်အတွင်း၌အနည်းငယ် soggy တယ်နှင့်အနားပတ်လည်မီးခိုးရောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
စတော်ဘယ်ရီသီးသန့်ပုလင်းထဲသို့ box ရောနှောခြင်းကိုထည့်ခြင်းဖြင့်ပန်းရောင်အလွှာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့် Battery ကိုရောမွှေပြီးနောက်၎င်းကို ၈″ ကိတ်မုန့်သုံးလုံးခွဲပါ။ သင့်တွင်ဒယ်အိုးတစ်ခုသာရှိပါကတစ်ချိန်ကမုန့်ဖုတ်။ သင်လိုအပ်သည်အထိကျန်ရှိသော Battery ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ထားနိုင်သည်။
သင်၏ကိတ်မုန့်အလွှာများကိုဒယ်အိုးထဲတွင် ၁၀ မိနစ်ခန့်အေးအောင်ထားပါ။ ထို့နောက်ကျန်အရာများကိုအအေးခံရန်အအေးခံစင်ပေါ်သို့လှည့်ပါ။ သင်တစ်နာရီခန့်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်ကိတ်မုန့်များထည့်ခြင်းဖြင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ ထိုအခါသူတို့သည်နှင်းခဲမှအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါ့ရဲ့စတော်ဘယ်ရီမုန့်တွေကိုသံပုရာ buttercream နဲ့အေးခဲအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သို့သော် buttercream မဆိုကြိုက်ပေလိမ့်မည် မုန့်ဒိန်ခဲနှင်းခဲ , တည်ငြိမ်ကြာပွတ်မုန့် ဒါမှမဟုတ် လတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီ buttercream ။
ငါကိတ်မုန့်ရောနှော box ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဘာလဲ
ငါအလွယ်တကူ buttercream သံပုရာ buttercream သို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ငါပဲအချို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည် လတ်ဆတ်သောသံပုရာထောပတ် , သံပုရာထုတ်ယူနှင့်သံပုရာ zest, ထို့နောက်အားလုံးအတူတကွရောထွေး။ သင်၌မရှိပါကသံပုရာထောင့်မှထွက်ခွာနိုင်သည်။
သင်၏အေးခဲနေသောကိတ်မုန့်ကိုသံပုရာ buttercream နှင့်ဖြည့်ပါ။ ငါသည်ငါ့ကိတ်မုန့်အလွှာများအကြား 1/4 butter ခန့် buttercream ဘို့ရိုက်ကူး။ ကိတ်မုန့်အလွှာအားလုံးနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ပြီးနောက်ကိတ်မုန့်တစ်ခုလုံးကိုထောပတ်ပါးလွှာလေးဖြင့်ဖုံးအုပ်ပါ။ ဤသည်ကိတ်မုန့်အပေါငျးတို့သအတွက်အစအနကုတ်အင်္ကျီနှင့်ဖျံဟုခေါ်သည်။
ကိတ်မုန့်ကိုရေခဲသေတ္တာထဲသို့မိနစ် ၂၀ ခန့်ထားကာအစအနကုတ်အင်္ကျီကိုကပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်သည်နောက်ဆုံး buttercream အလွှာကိုကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် တင်၍ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပုံစံဖြင့်အလှဆင်နိုင်သည်။ ငါနှင့်အတူသတ္တုတွင်းအလှဆင် sweetapolita ဖြန်း ။ ဒါက 'Twinkle' ဖြန်းဖြန်းဖြစ်ပါသည်! ငါ့အကြိုက်ဆုံးတစ်ခု
ငါသည်ဤစတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်ရောနှောစာရွက်ဘယ်လောက်လွယ်ကူသောကိုချစ်! မင်းလည်းမင်းကိုချစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ပျော်ရွှင်စွာဖုတ်ခြင်း!
ခြစ်ရာကဲ့သို့နီးပါးအရသာရှိတဲ့လွယ်ကူတဲ့စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်ရောစပ်စာတစ်မျိုး။ မင်းကအရသာရှိတဲ့စတော်ဘယ်ရီမုန့်တစ်မျိုးလိုချင်ပေမယ့်အချိန်တိုအတွင်းမှာဖြစ်မယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။ တစ် ဦး yummy သံပုရာ buttercream နှင့်အတူအေးခဲ! ပြင်ဆင်ချိန် -၁၀ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၄၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ505kcal
▢၁ သတျတော စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်ရောနှော သို့မဟုတ်သင်စတော်ဘယ်ရီမတှေ့နိုငျပါလျှင်ဖြူ
▢၁ ခွက် (၅ oz) AP ဂျုံမှုန့်
▢၁ ခွက် (၇ oz) သကြားဓာတ်
▢1/4 Tsp ဆားငန်
▢၁ ခွက် (၈ oz) ဒိန်ချဥ် အခန်းအပူချိန်
▢1/2 ခွက် (၄ oz) အရည်ကျိုထောပတ်
▢1/2 ခွက် (၄ oz) နို့
▢3/4 ခွက် (၆ oz) စတော်ဘယ်ရီသန့်စင်
▢၁ Tsp စတော်ဘယ်ရီ emulsion သို့မဟုတ်ထုတ်ယူ
▢1/2 Tsp သံပုရာထုတ်ယူ
သံပုရာလွယ်ကူသော Buttercream Frosting
▢3/4 ခွက် (၆ oz) Pasteurized ကြက်ဥလူဖြူ
▢၅ ခွက် သကြားမှုန့်
▢၃ ခွက် unsalted ထောပတ် အခန်းအပူချိန်ပျော့
▢1/2 Tsp ဆားငန်
▢နှစ် Tsp သံပုရာထုတ်ယူ
▢1/4 ခွက် သံပုရာထောပတ် မလုပ်မနေရ
▢၁ Tbsp သံပုရာ zest
စတော်ဘယ်ရီ Box ကိုရောနှောကိတ်မုန့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ
ဒီကိတ်မုန့်အတွက်ညွှန်ကြားချက်စူပါလွယ်ကူပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းအားလုံးကိုပန်းကန်လုံးထဲသို့ထည့်ပြီး ၂ မိနစ်ခန့်ရောထွေးပါ။ Voila! ကိတ်မုန့် Battery ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Battery ကို ၈'၃ 'ိတ်မုန့်အိုးထဲထည့်ပါ။ 350ºFတွင် ၂၅-၃၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်သွားသို့သွားပါသို့မဟုတ်သွားသွားတစ်ချောင်းထိုးထည့်လိုက်သည်အထိသန့်ရှင်းပါ
လွယ်ကူသော Buttercream Frosting
Pasturized ကြက်ဥအဖြူနှင့်အမှုန့်သကြားတို့ကို whisk ပူးတွဲပါသည့် stand mixer တစ်အိုးထဲတွင်ထားပါ။ ပေါင်းစပ်သည်အထိအနိမ့်ကိုရောမွှေပါ၊ ပြီးနောက်မြင့်မားသောအထိကိုထဲ့ပြီး ၃ မိနစ်ကြာအောင်ရိုက်ပါ။ ဒါဟာ meringue မဟုတ်ဘဲတော်ဝင်အေးခဲခြင်းနှင့်တူပါလိမ့်မယ်။
ပေါင်းထည့်သည်အထိအနိမ့်အပေါ်ရောနှောနေစဉ်သင့်ရဲ့ဆားထဲမှာပြီးတော့သင့်ရဲ့ထောပတ်သေးငယ်တဲ့အပိုင်းပိုင်းအတွက်ထည့်ပါ, ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့အထိတိုးမြှင့်။ အလင်းရောင်၊ အဖြူရောင်နှင့် fluffy အထိကြာပွတ်နှင့်ထောပတ်ကဲ့သို့အရသာမရှိတော့ပါ။ ဒီဟာက ၁၀-၁၅ မိနစ်။
paddle attachment ကိုပြောင်းပြီး buttercream ချောမွေ့စေရန်နှင့်ပူဖောင်းများကိုလျှော့ချရန်အတွက် ၁၅ မိနစ်ခန့်ရောနှောပါ။
ပေါင်းစပ်သည်အထိသင့်ရဲ့သံပုရာထောပတ်, သံပုရာ zest နှင့်ထုတ်ယူပါ။
ကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းများစာရင်း အကြံပြုထားသောကိရိယာများ * မှတ်စု - ဤစာရင်းတွင်သင့်အားမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်မှမပေးပါသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ရောင်းရန်အနည်းငယ်သာကျန်တော့မည့်တွဲဖက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။ *
သုံး '' ကိတ်မုန့်အိုး
သုံး '' ကိတ်မုန့် - ဖုတ်နှင့်အအေး
လွယ်ကူသော Buttercream (တသုတ်)
ဗာဒံသီး marzipan ကဲ့သို့တူညီသည်
ကိတ်မုန့်အဘို့အ fondant ရှာဘယ်မှာ